ER44-8 waa nooc ka mid ah siligga iska caabbinta cimilada oo leh daaha naxaas ah oo aad u sarreeya iyo iska caabin daxal sare leh, suuragal xasilan oo xasillan, tabeello yar yar, dhismeyaal alxamid heer sare ah.
ER70S-6 Waxaa loo isticmaalay weelka dhismaha, mashiinka dhismaha, dhismaha wadada tareenka iyo inbadan oo kale
ER309 / ER309L / ER309LSi waxaa loo adeegsaday alxamida birta
Isticmaalaya: ER309 / ER309L: Waxaa loo isticmaalay alxanka birta ah, sida birta khafiifka ah iyo Cr-Mo steel loo isticmaalo alxamida, alxanka SUS309S, SCS17, sida, kuleylka, dabeylaha, iyo xasilloonida arc, waxqabadka alxanka, Ar + 0.5-2 Alxanka gaaska ee O2; la mid ah qaybaha loo isticmaalay alxamdaminta wixii gaf ah iyo xargaha; loo isticmaalaa in lagu xidho 304 profiles bir leh; 304 alxamida lakabyo isku dhafan oo bir ah oo loogu talagalay birta kaarboon-gaaska iyo xarkaha lakabka birta naxaas ah. ER309LSi: Pr ...
H08MnMoA (EA2) ee alxanka kulul oo bir duugay iyo steel caadi ah
Codsiga: Loogu talagalay alxanka kulul ee birlaxaya iyo birta caadiga ah sida 15MnVN, 15MnVNR, 15MnTiRe Waxay ku habboon tahay alxanka birta ah sida X60, X65 iwm.
ER308 / ER308L / ER308LSi waxaa loo adeegsaday 18% Cr8% Ni ama birta aan fiicnayn iyo18Cr - 8Ni steels
ER308: Waxaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo walxaha bir-tabta ee birta leh ee leh 18% Cr8% Ni ama steel aan lahayn shey kiimiko la mid ah oo leh silig bir ah.
ER308L: Ugu horayn waxaa loo isticmaalay alxamida 18Cr - 8Ni steels. Xargaha fiilooyinka waxay yeelan doonaan iska caabin aad u sarreysa oo ka badan tan MIG 308, haddii loo isticmaalo alxarka SUS 304L.
ER307 waxaa loo adeegsaday alxamida waxyaabaha birta ka samaysan ee manganese ee birta ah iyo xargaha
ka daadanayo Cored Arc Alxanka Wire , Alxanka la isticmaalo , ka daadanayo Cored Wire Quudiyaha ,